निर्वाचन क्षेत्र काँग्रेसमय, जताततै काँग्रेसका नेता र कार्यकर्ता | Rastra News
पोखरा, १ मंसिर । कास्की क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा जताततै काँग्रेसका नेता र कार्यकर्ता देखिएका छन् ।
सो निर्वाचन क्षेत्रका ११ वटा वडामा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नेता र कार्यकर्ता एक भएर जुटेका छन् । वडाका बस्ती र टोलमा बिहानदेखि साँझसम्म चार तारे झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख बोकेका नेता तथा कार्यकर्ता देखिन्छ ।
‘साच्चै यत्तिबेला कास्की क्षेत्र नं २ काँग्रेसमय बनेको छ, कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले भने, ‘निर्वाचनको परीणाम काँग्रेसको पक्षमा आउने निश्चित छ ।’
काँग्रेस भित्रको एकताका कारण सबै नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित हुनु र सरकारका गतिविधिबाट वाक्क बनेकाहरु पनि काँग्रेस जिताउँने पक्षमा खुलेरै लाग्दा निर्वाचन क्षेत्रको वातावरण काँग्रेसमय बनेको छ ।
काँग्रेसले त्यागी, निष्ठावान नेता खेमराज पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएका कारण पनि निर्वाचन क्षेत्र काँग्रेसमय बनिरहेको छ ।
कास्की कांग्रेसले घरदैलो अभियान तीब्र बनाएको छ । कास्की क्षेत्र नं. २ का ११ वटौ वडामा मतदाता भेटघाट कार्यक्रम जारी छ । जस अन्तर्गत पोखरा १७ मा पनि आइतबार अभियान जारी रह्यो ।
यस वडामा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसी, वडा इकाइ सभापति देवराज आचार्यसहितको घरदैलो अभियान भएको हो । आइतबार महतगौंडा क्षेत्रका मतदातासंग भेटघाट भएको इकाइ सभापति आचार्यले बताए।
यता, पोखरा–३३ मा आइतबार बिहानैदेखि घरदैलो अभियान शुरु भएको छ । कोणसभा पछि घरदैलो अभियान शुरु भएको हो । अभियानमा उम्मेदवार खेमराज पौडेललगायत कास्कीका नेताहरू सहभागी छन् । उम्मेदवार पौडेलले ८८ वर्षीय होमनाथ आचार्यबाट आशिर्वाद दिएर अभियान शुरु गरेका हुन् ।
उम्मेदवार पौडेलले पोखरा–३३ आधाजसो क्षेत्रमा आइतबार घरदैलो सके भने भोलि सोमबार अभियान जारी रहने बताइन्छ ।
घरदैलोका क्रममा विभिन्न स्थानमा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम समेत जारी रहेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सो क्षेत्रका चुनावी कमाण्डर जीवन परियारले जानकारी दिए ।
उनले पोखरा–३३ ठूलो वडा भएकाले आफूले धेरै दिन देखि खटिएर अधिकांश मतदातासंग भेटघाट गरिसकेको र केही मतदातासंग अझै भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
उनले भने, ‘भेट्घाटका क्रममा जनताका गुनासा धेरै नै पायौं, अब उनीहरूका गुनासालाई पार्टीमा छलफल गरेर संवोधन गर्न तर्फ पनि ध्यान दिन्छौं ।’ उनले कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास अझै कायमै रहेको बताए ।
यता, पोखरा–७ लगायत सबै वडामा चुनावी अभियान जारी छ । सबै वडामा नेता कार्यकर्ता निकै सक्रिय भएर खटिरहेको पार्टी सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए । पोखरा–७ मा नेता शुक्रराज शर्मा र पोखरा–८ मा तारानाथ रानाचाट १० दिनदेखि निरन्तर रुपमा खटिरहेका छन् ।
पोखरा–७ अन्तर्गत आइतबार घारीपाटन क्षेत्रमा घरदैलो गरिएको छ । पोखरा–७ का वडा इकाइ सभापति नवीन बरालका अनुसार पोखरा–६ का अधिकांश क्षेत्रका मतदाता भेटघाट कार्यक्रम सकिएको छ ।
अब पार्टीको धारणा र एजेन्डा लिएर पुनः एक पटक मतदातालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । सभापति बरालले कांग्रेस जनतामाझ मुग्दा मतदाता सरकारप्रति निकै आक्रोशित भएको उनले बताए ।
सरकारका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा ः श्रेष्ठ
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व उपसभापति गोपालमान् श्रेष्ठले दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न लागेको बताएका छन् ।
अघिल्लो चुनाव कांग्रेसले हार्दा मुलुकले हारेको भन्दै उनले नेकपा सरकारका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा परेको बताएका आरोप लगाएका हुन् ।
कास्की क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत पोखरा–८ मा आयोजित घरदैलोका क्रममा नेता श्रेष्ठले यो सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा मुलुक हारेको र लोकतन्त्र धरापमा परेको प्रमाणित हुँदै गएको उनले जिकिर गरे ।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाटले यो मुलुकको रक्षा कांग्रेसबाहेक अरुले गर्न नसक्ने जिकिर गरे । पोखरा–८ का चुनावी कमाण्डरसमेत रहेको रानाभाटले सरकारको खलत रवैयाले जनता वाक्क दिक्क भएको बताए । उनले भने, ‘घरदैलोका क्रममा जनता निकै निराश भएको पायौं । सरकारका कारण राजनीतिक दलहरूप्रचि जनताको वितृष्णा पैदा भएको छ।’
घरदैलो अभियान पार्टीका इकाइ सभापति सुवास सिग्देलको नेतृत्वमा भएको थियो । आइतबार पोखरा–८ का सृजनाचोक, सिमलचौर, आलुमाइलाचोकमा घरदैलो अभियान भएको थियो ।
अधिनायकवादी शक्तिलाई परास्त गर्न कांग्रेस तयार ः पौडेल
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अधिनायकवादी शक्तिलाई परास्त गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताएका छन् ।
कास्की क्षेत्र नं. २ को चुनावी अभियानका लागि आइतबार पोखरा आएका नेता पौडेलले नेपालमा कम्युनिष्ट तानाशाहा बढ्ने खतरा रहेको भन्दै त्यसबाट सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कम्युनिष्ट सरकार एकदलीय तनाशाह र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधान खतम गर्ने, न्यायालय ध्वस्त पार्ने, प्रेसमाथि धावा बोल्नेतर्फ यो सरकार उन्मुख छ’, उनले भने ।
नेता पौडेलले भने, ’जनताको विश्वास, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहना पनि कांग्रेसले चुनाव जितोस् भन्ने छ । त्यसैले पनि यो चुनाव जितेर कम्युनिष्ट अधिनायकवाद विरुद्ध लड्नुपर्छ।’
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकोले त्यसका विरुद्ध यो चुनाव भएको बताए । ‘यो चुनाव जनमत संग्रह हो । कम्युनिष्ट शासन र सरकारले गरेका गतिविधि ठीक छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि कांग्रेसले यो चुनाव जित्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
Previous article‘खेमराजलाई जिताउँदा पोखराको प्रतिष्ठा बढ्छ’
Next articleमतदाताको आशा ‘खेमराज’, आचार्य भन्छिन्,‘नेता हुनु त खेमराज गुरु जस्तै हुनु’
भाइरल भएको एउटा पेनाल्टी, २०–१९ गोलले विजयी खेल (भिडियोसहित)
बम आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा
लकडाउनको असर वृद्वाश्रममा पनि, खाद्यान्न अभाव
युवा दिवसमा ट्रेड युनियन काँग्रेसको प्रशिक्षण
४० लाख सहित दुई पक्राउ ,यसरी ल्याइएको थियो त्यत्रो रकम